Ny faniriana no mahatonga ny fahaterahana sy ny fahafatesana, ary ny fahafatesana sy ny fahaterahana,
Saingy aorian'ny fiainana maro, rehefa resin'ny saina ny faniriana,
Maniry ny fahalalahana sy fahalalana ny tena, hoy Andriamanitra tafatsangana:
Teraka avy tany an-kibonao ny fahafatesana sy ny maizina, ny faniriana, tafiditra ao aho
Ilay mpampiantrano tsy mety maty.
Vol. 2 NOVAMBRA, 1905. Tsia
IREO hery rehetra izay tokony hiadanan'ny sain'ny olombelona dia ny faniriana no tena mahatsiravina indrindra, mamitaka, mampidi-doza ary tena ilaina indrindra.
Rehefa manomboka mitombo aloha ny saina dia raiki-tahotra ary nolavin'ny faniriana maha-tebiteby, fa amin'ny alàlan'ny fiarahana dia lasa manintona ny famerenana, mandra-pahatongan'ny saina lasa voafitaka ary lasa resin'ny fanadinoana azy. Ny loza dia noho ny faniriana ny tenanao dia mety hanana vinavina lavitra noho ny tokony ho izy ny saina, na mety hisafidy ny hamantatra ny tenany, ary hiverina amin'ny haizina sy ny faniriana. Ilaina ny faniriana hanohitra ny saina, fa amin'ny alàlan'ny fahitana azy dia hahalala ny tenany ny saina.
Ny faniriana no angovo matory ao an-tsaina. Mihetsiketsika voalohany amin'ny sain'izao tontolo izao, ny hery dia manaitra ny mikraoba an'izay efa misy rehetra. Rehefa manaitra ny fofonain'ny saina dia taitra avy amin'ny toetrany miharihary ary mihodidina sy mizaka ny zavatra rehetra izy.
Jamba sy marenina ny faniriana. Tsy afaka hanandrana, na fofona, na hikasika. Na dia tsy misy fahatsapana aza ny faniriana, dia mampiasa ny sainim-po mba hitompoana azy irery izy. Na jamba dia mivoaka amin'ny maso, manintona ary maniry ny lokony sy ny endriny. Na marenina aza dia mihaino sy misotro amin'ny alàlan'ny sofina ny feo manaitra fahatsapana. Raha tsy misy tsirony, na izany aza, dia mihantona izany ary mankasitraka ny tenany amin'ny alàlan'ny felatena. Tsy misy fofona, nefa ny fofona ao anaty orona no mampisy fofona manitra.
Ny faniriana dia ato amin'ny zavatra rehetra misy, fa amin'ny alàlan'ny firafitry ny biby voajanahary ihany no anehoana izany. Ny faniriana dia tsy afaka mifanena afa-tsy, hajaina ary mitarika hampiasa avo kokoa noho ny biby raha eo amin'ny toeran'ny biby natiora ao amin'ny vatan'olombelona.
Ny faniriana dia banga tsy afa-po izay mahatonga ny fahatongavana sy hidiran'ny fofonaina foana. Ny faniriana dia ilay whirlpool izay hahatonga ny fiainana rehetra ho ao aminy. Ny faniriana dia miditra sy mandany ny endriny rehetra amin'ny alàlan'ny fiovan'ny toetrany tsy miova. Ny faniriana dia horita lalina ao amin'ny taovam-pananahana; miakatra amin'ny alàlan'ny ranomasin'ny fiainana ny tranolainy ka manompo ny fangatahana tsy mbola nahafa-po azy; zavatra iray, mirehitra, afo, dia tezitra amin'ny filany sy ny filàny ary manimba ny filana sy ny faniriany, miaraka amin'ny fitiavan-jambany ilay vampira dia manintona ny herin'ny tena izay itiavan'ny hanoanana azy, ary mamela ny olona ho may fantsom-bovoka amin'ny lavenon'izao tontolo izao. Ny faniriana dia hery jamba izay manome, mandreraka ary mahafaty, ary fahafatesana ho an'izay tsy afaka mijanona eo aminy, mamadika izany ho fahalalana, ary mampita izany ho sitrapo. Ny faniriana dia mpivaro-tena izay manintona ny eritreritra rehetra momba azy ary manery azy hanome ny melodie vaovao ho an'ny dihin'ny eritreritra, endriny vaovao sy zavatra hividianana azy, drafitra vaovao ary fitakiana hanome fahafaham-po ny filàm-po ary hampitsahatra ny saina. toetra sy panderita ho an'ny egotisme. Ny faniriana dia olitra izay mitombo, mihinana ao anaty ary matavy ao an-tsaina; raha niditra tao anatin'ny fihetsehana rehetra dia nanintona ny sainy ary nahatonga ny saina hieritreritra azy io ho tsy azo sarahina na ahalala azy amin'ny iteslf.
Ny faniriana kosa dia ny hery izay mahatonga ny voajanahary hamoa sy hamoaka ny zavatra rehetra. Raha tsy misy faniriana dia mandà ny hanambady ary hamolavola karazana azy ireo ny firaisana ara-nofo, ary ny fofonaina sy ny saina tsy ho tonga nofo intsony; Raha tsy misy faniriana dia ho very ny hery manintona tena tsara ny endriny rehetra, dia hirodana any anaty vovoka ary hiparitaka any anaty rivotra manify, ary ny fiainana sy ny eritreritra dia tsy hanana endrika hamolavolana sy hamolavola ary hiova; raha tsy manam-paniriana ny fiainana dia tsy afaka mamaly fofonaina ary mitsimoka ary mitombo, ary tsy manana fitaovana hamerenana ny fiasa intsony izy, dia hitsahatra ny hiasa ary hamela ny saina tsy ho feno banga. Raha tsy manam-paniriana ny fofonaina dia tsy hiteraka zava-dehibe, dia mandry izao rehetra izao sy ny kintana ary hiverina ao anaty singa iray voalohany, ary ny saina dia tsy ho nahita ny tenany alohan'ny faharavana ankapobeny.
Manana saina ny saina fa tsy manana. Ny saina sy ny faniriana dia avy amin'ny faka sy zavatra mitovy, fa ny saina dia vanim-potoana evolisiona lehibe mialoha ny faniriana. Satria ny faniriana dia mifandraika amin'ny saina izany dia manana hery misarika sy mitarika ary mamitaka ny saina amin'ny finoana fa mitovy. Ny saina dia tsy afaka manao tsy misy faniriana, ary tsy afaka manao izay tsy misy ny saina. Ny faniriana dia tsy hovonoin'ny saina, fa ny saina dia mety hampiakatra ny faniriana ambany kokoa amin'ny endrika avo kokoa. Tsy afaka mivoatra ny faniriana raha tsy misy ny fanampian'ny saina, fa ny saina dia tsy afaka hahalala ny tenany raha tsy andramana amin'ny faniriana. Anjaran'ny saina ny mitaiza sy manavaka ny faniriana, fa satria tsy faniriana sy jamba ny faniriana dia mitazona ny saina am-ponja ny saina mandra-pahitan'ny saina amin'ny alàlan'ny famitahana ary ho ampy hahatohitra ny faniriana. Amin'izany fahalalana izany dia tsy hoe tsy mitovy ihany ny saina ary noho ny tsy fahafantarana ny fanirian'ny biby fa dia hanomboka ilay biby ho eo amin'ny fomba fisainany ihany koa izy ary hampiakatra azy avy ao amin'ny haiziny ho any amin'ny sailin'ny hazavan'ny olombelona.
Ny faniriana dia dingana iray amin'ny fahatsiarovan-tena mahavelona satria miaina ao anaty fiainana ary mivelatra amin'ny alàlan'ny firaisana ara-nofo avo indrindra, izay mahatratra ny lanin'ny faniriana. Amin'ny alàlan'ny nieritreretana fa mety ho lasa misaraka sy mandalo ivelan'ny biby izy io, mampiray azy amin'ny fanahin'ny zanak'olombelona, ​​manao zavatra amim-pahakingana miaraka amin'ny herin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ho tonga saina iray ihany.